Maqaalo | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha | Page 5
Taariikh-xumidda Mooryaan Daahir Cabdulle Calasow “Daahir-cawir” Qeybtii 7-aad
Marka dib loo dheehdo Taariikh-nololeedka Moryaanimadda iyo Aflaagadada Joogtadda ee uu Daahir Cabdulle Calasow “Daahir-cawir” u geysanayo Shaqsiyaadka uu ka waayo Lacagaha Baadda, waxaa durbadiiba la is-weydiin karaa Qaabka uu ku soo barbaaray iyo muuqa uu ku dhex leeyahay dadka aaoonta u leh. Daahir Cabdulle Calasow “Daahir-cawir” waxa uu ku soo garaadsaday, kuna soo dhex barbaaray nolol Maleeshiyo, Gandherenimo, ...
Dagaalamayaasha Kooxaha Hubeysan ee ugu taajirsan Caalamka.
Wargeyska caanka ee Forbes ayaa lagu soo bandhigay Tobanka Kooxaha Hubeysan ee ugu dhaqaalaha badan Calaamka iyo Koox kasta Kharajka soo gala Sannadkiiba. Kooxaha Hubeysan ee ka jira Calaamka waxay u kala hanta badan tahay sidatan:- Kooxda Dowladda Islaamka ee Daacish (ISIS). Daacish waxaa la rumeysan yahay inay tahay Kooxaha ugu taajirsan Kooxaha kale ee hubeysan ee ka jira ...
Haweenka shaqaalaha Sacuudiga oo loo digay.
Wasaaradda Shaqadda ee Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in la ganaaxi doono Haweenka shaqaalaha ee aan madaxooda hagoognayn marka ay ka hawl-galayaan Xafiisyadda. Sharciga cusub ayaa lagu sheegay in Haweeneydii uusan madaxa u daboolnayn lagu ganaaxi doono 1,000 Riyaalka Sacuudiga. Wargeyska maalinlaha ee Al-hayat ayaa qoray in xitaa la ganaaxi doono Shirkadaha lagu helo iyagoo ay u ...
Ma og tahay in uu Daahir-cawir ahaan jirey Xiriiriyihii Kooxaha dadka ku afduuban jirey Muqdisho ?
Akhriste, ma og tahay inuu Daahir-cawir ahaan jirey Madixii xiriirin jirey Xarumihii dadka laga afduuban jirey ee ka dhisnaa magaalladda Muqdisho labadeeda dhinac. Mise u malaynaysaa inaad Daahir-cawir is-aragteen maalin, isagoo la socda Kooxda Walaalkaa ama Waalidkaa afduubatay, si loo siiyo Lacag Baad ah? Nala wadaag oo noo soo dir, si aan ugu baahino Bulshadda. © dadweynaha.com Nagala soo ...
OGEYSIIS MUHIIM AH: Waxaa laga yaabaa inaad ka mid tahay inta Dhibanaha u ahDaahir Cabdulle Calasow “Daahir Cawir” ama aad taqaan qof uu dhibaateyey. Haddaba, noo soo dir Xog ku saabsan dhibaatayntiidsa, si aan ugu bandhigno Bulshada. Ogow muhiim ma aha inaad magacaaga noogu soo dirto, laakiin waxaa muhiim ah inaan Bulshadda gaarsiino Xogaha Dhagareed ee uu Daahir Cabdulle Calasow ...
Maxaad kala socotaa astaamaha ay wadaagaan Daahir Cabdulle Calasow iyo Ayaan Xirsi? Qeybta 4-aad
Sidii aanu horay idiinkugu baahinay qeybihii hore ee nolosha Yaqyaqsiga leh ee Wariye isku sheega Daahir Cabdulle Calasow (Daahir Cawir) ayaa waxaan maanta idiin soo gudbineynaa qeybta 4-aad oo ku saabsan Astaamaha ama dabeecadaha ay wadaagaan Daahir Cawir iyo gabadha horey u Gaalowday ee Ayaan Xirsi Boon. Dad deris la ah Daahir Cawir ayaa aad ula yaabay hab dhaqanka foosha ...
Maxaad kala socotaa Nolosha silloon ee Daahir Cabdulle Calasow “Daahir-Cawir”? Qeybta 3-aad
Jaalliyadda Soomaaliyeed kula nool dalka Holland “ama Netherlands” waxay badankooda la anfariirsan yihiin dabeecadaha silloon iyo Nolosha xun ee uu ku nool yahay Saxafi Isku-sheega Daahir Cabdulle Calasow “Daahir-cawir”. Daahir Cabdulle Calasow “Daahir-cawir” waxa uu deggan yahay magaalladda Breda oo ku taalla Koonfurta Holland, wuxuuna saaxiib la yahay Dhallinyaro fara-ku-tiris oo ay jaal ku yihiin Balwadaha iyo Dhaqanka xun. ...
Maxaad ka taqaanaa Mooryaanimadda Saxafi isku-sheegaa Daahir Cabdulle Calasow “Daahir-Cawir” ? Qeybta Labaad:
Daahir C/lle Calasow “Daahir-cawir” waxa uu ka faanaa inuu sheegto inuu ka soo jeedo ama ka dhashay Qabiilka Galgalaha , inkastoo Walaalkiisa, Cabdi Cabdulle Calasow oo deggan South Afrika ku faano inuu yahay Madaxa Jaalliyadda Galgala ee ku nool dalka South Afrika. Waa arrin Cajiib ah !!!, Waa Su’aal da’ weyn oo madaxa daalinayso૚sababaha uu Daahir-yare mar kata u dafirayo ...
Maxaad ka taqaanaa Mooryaanimadda Saxafi isku-sheegaa Daahir Cabdulle Calasow “Daahir-Cawir” ? Qeybta Koowaad:
Xog Ururin iyo dabagal dheer kadib, waxaan Shaqsi ahaan ka fursan waayey inaan qalinka u qaato Sooyaalka Nololeed iyo Akhlaaq-xumidda Daahir Cabdulle, oo la qiri kari karo inuu yahay Kansar magaca kaga ciyaarayo Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Haybadda ku dhex leh Bulshadda Soomaaliyeed. Anigu ma ihi Saxafi, balse waxaan ahay Cilmi-baare Bulsho oo wax badan ka yaqaano Anshaxa Guud ...
Nin ganacsi u watay Maskax Lo’aad oo lagu xiray Garoonka Diyaaradaha Qaahira.
Nin u dhashay dalka Sudan ayaa waxaa Jimcihii la soo dhaafay lagu qabtay Garoonka Diyaaradaha ee magaalladda Qaahira, isagoo watay 5 Kiilo oo maskaxda Lo’da ah. Shaqaalihii barista Garoonka waxay ninkii weydiiyeen haddii uu haysto Dukumentiga muujinaya Faya-qabka Maskaxda, wuxuuse sheegay inuusan wax Dukumenti ah wadanin. Waxaa loo oggolaanin inuu horey u sii galo magaalladda Qaahira, inkastoo laga reebay ...